Aqbali mayno dib dambe in lataabto karaamada Indheer garadka Puntland ee Qaaliga ah (Maqaal ) – Radio Daljir
Aqbali mayno dib dambe in lataabto karaamada Indheer garadka Puntland ee Qaaliga ah (Maqaal )
Nofeembar 23, 2018 11:48 b 0
Abwaan cabulqadir cabdi shube Waa abwaan Soomaaliyeed,nin walbaa garanaaya waana nin wadani ah had iyo jeera tiriya gabayo wax ku ool ah oo dad waynaha soomaaliyeed uu ku dareen siinayo qaabsuugaaneed fahanka diinta dadka iyo dalka soomaaliyeed. waa abwaan bidhaamiya waxa Soomaaliya ahaan jirtay hada tahay iyo saadaalin waxay noqon doonto mustaqbalka hadii illaahay idmo. Abwaan weeye mideeya soomaaliya,abwaan weeye isu soo duma soomaalida kala irdhoowday abwaan weeye taageera dawladnimada umada soomaaliyeed iyo wada jirkeeda.
Waa halgamaa ah dawlad doon dal doon dad doon.waa Cabduqadir cabdi shube oo ah nin illaahay siiyay waxa cid walba uusan siin oo ah xikmad iyo fahan fog. hibo weeye aan cidina ka xoogi karayn xaqiri karayn oo alle ku manahaystay isaga.
Waxaa soomaali oo dhami iyo gaar ahaan Puntland laga wada ogyahay, in laysku dayay in la wax yeelo sharafka iyo karaamada abwaanka soomaaliyeed ee u dhashay Puntland shube. Handadaad iyo heer xarig ayaa loola tagay,sababta lagu haysto oo ah in uu yahay wadani raba soomaali oo dawlad ah oo kabaxda dhibka.
Waxaa lagu ee deeyay in maxaad MOGDISHO utagtay,maxaad u taageeri Mogdisho! waxaa kuwa sameeyayna waa kuwo dilaaleey ah oo ka soo horjeeda in ay is fahamaan shacabka puntland iyo kuwo Mogdisho. waxay had iyo goor sixun uugu kala dhex jiraan yacni isku diran is faham dhaca oo keena isu imaansho soomaaliyeed si dalka dawlad u yeesho hanata dalkoodhan.
Ninkastoo siyaasi ah,aqoon yahan ah,abwaan ah oo daacad u ah dawlad soomaaliyeed oo dhisanta,waxaa lagu hayaa caga juglayn iyo dhibaato ah caburin. shacabka puntland intee in le eg ayuu kusii jiri karaa dikteeytarnimo?
Waxaa shacabku aad uuga xunyahay reer puntland dal iyo dibadba maamulka puntland ka jira oo u dhaqma qaabkii TIGREEGA oo kale ah aniga mooye cidkale puntland matalinkarayso,wax ma fahmi karayso,marwalbana anaa saxan. Maanta waxaa lawada ogsoon yahay in aan shacab xoog lagu haysan karayn iyo caburin,inaan layska yeelayn hantida umada ka dhaxaysa oo lala gaar noqday lagu danaystay, waliba dadkii laga dhacayna lagu sii dhibaataynaayo.
Ninwalbaa wuu arkaa halka uu Tigree maray ee uu ku danbeeyay,mudo sodon sanadood ah ayuu dadka caburinaayay,hantidii ka dhaxaysayna uu kaligii aruursanaayay,oo dhacaayay, maantana hoog iyo ceeb aduun iyo xabsi buu mutaystay. waxaan aad uugu faraxsanahay in abwaankii shube iyo suldaan xarago si nabad iyo xor ah u joogaan guryahoodii. shacabka iyo wax garadka puntland dal iyo dibad aad iyo aad ayuu uuga xun yahay falalkaa kuracan ee kasocda puntland mudo 20 sanadood ah,sidaa daraadeed waa in dib laysugu noqdaa la keenaa isbadal, ka dhaca puntland.
Waana in aysan dib danbe u dhicin in biri magaydada,abwaanada iyo madaxda dhaqanka aan lagu samayn xadgud iyo xurmo daro taasoo sharaf dhac ku ah dhaqanka puntland shacabka ku nool.Puntland ma aqbalayso in dad gaara oo siyaasiyiin ah,oday dhaqameed ah uu tago Mogdisho isagoo sigaara wax u doonaaya, halka siyaasiyiinta iyo oday dhaqameedyada kale haday tagaan la xirayo, hadaba arinkaasi waa dilaal foolxon oo aan dan u ahayn puntland iyo mogdisho midna.hada waxba sheeg mayno laakiin waa ognahay odayaasha iyo maamulka puntland khiyaanada kuwajahan madaxda fadaraalka oo been lagu seexiyay!! shaadhkana loo badashay.
Waxaa qalinka uqaatay Yuusuf Omar.
Madaxweyne Farmaajo oo Istanbul ka dagay